Pachís 🎲 Midira, mankafiza ary milalao avy amin'ny Emulator.online
Parcheesi. Tian'ny olona maro eran-tany, ny parchis dia lalao filalaovana izay mankafy sy miala voly amin'ny fahatsorany. Andao hojerentsika ny Tantara sy ny fahalianan'ny Parcheesi.
Parcheesi: ny fomba filalaovana tsikelikely 🙂
Inona no atao hoe Parcheesi? 🎲
Ny lalao Parcheesi dia lalao filankevitry ny birao izay tsy mila fampidirana. ATSINANANA lalao nentim-paharazana Safidy tsara foana izy io amin'ny fampivondronana ny ankizy sy ny olon-dehibe ao an-trano na amin'ny toerana ivelany.
Fitsipiky ny Parcheesi
Tsy afaka miverina ireo taila, afaka mandroso amin'ny familiana famantaranandro ihany izy ireo, ary hiditra ny trano farany dia tsy maintsy soloanao ny isa takiana.
Raha ny isa izay mivoaka dia lehibe noho izay ilaina ary ny pawn dia mamindra ny fidirana amin'ny kianja farany, tsy maintsy mihodina ny tabilao indray mandeha indray ianao.
Ny mpilalao dia mifandimby izy ireo manodina ny dice.
Mba hanesorana ny karatra amin'ny tranony na boaty fanombohana, ny mpandray anjara tsy maintsy mahazo ny isa 5 (amin'ny toerana sasany ny isa 6). Mandra-pahatongan'izany dia tsy maintsy mijanona eo amin'io kianja io ianao ary mandalo ny anjaranao.
Ny faha-6 dia ny Grail Masina an'ny Parcheesi, tahaka izany mamela sombina handroso efamira 6 ary ahodina ny dice indray.
Raha mihodina miaraka amin'ny dice ianao telo 6 misesy, ny gadona farany nafindra dia voasazy amin'ny fiverenana amin'ny kianja fanombohana, ny toerana misy ny kitapo eo am-panombohan'ny lalao.
Ao amin'ny Parcheesi, tsy mihoatra ny fehezan-dalàna 2 no avela hipetraka amin'ny kianja mitovy amin'ny solaitrabe.
Raha misy sombin-javatra roa amin'ny kianja iray, dia misy "tilikambo" na "sakana" atsangana manakana ny crosswalk misy loko hafa.
Ny mpamorona azy ihany no afaka manala ny sakana. Raha manakodia 6 amin'ny maty ity mpilalao ity dia voatery manaparitaka ny firafiny izy, mamindra ny iray amin'ireo pneau amin'ny tilikambo.
Raha misy manodina ny dice ary miafara amin'ny fipetrahana amin'ny toerana efa misy namana dia ity namana mampalahelo ity dia tsy maintsy miverina amin'ny voalohany. Antsoina hoe "mihinana ny mpanohitra".
Tantaran'i Parcheesi 🤓
Hoy ny tantara ny lalao izay hiteraka Parcheesi dia teraka tany India taloha ela be, tamin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX.
antsoina hoe Pachisi , dia nilalao tao amin'ny malaza izy io Lava-bato Ajanta , hita ao amin'ny fanjakan'ny Maharashtra.
Ny fanehoana azy voalohany dia miseho amin'ny gorodona sy ny rindrin'ny zohy, izay ampiasaina amin'ny solaitrabe.
Ny te hahafanta-javatra dia noho ny haren'ny sary sokitra sy sary hosodoko lava-bato ao aminy Taonjato faha-XNUMX talAndroany, ity tranobe maritrano ity izay misy zohy roa amby telopolo dia UNESCO World Heritage Site. Tokony hahita toerana fizahan-tany ho an'izay mitsidika an'i India.
Ny fahalianana iray hafa, izay voamarika tamin'ny tantara taloha, no fomba "nifandray" kely kokoa noho ny amperora indiana Jalaluddin Muhammad Akbar noforonina mba hilalao Pachisi. Raha tsorina dia namorona kinova mivantana an'ny lalao, manolo ireo sombin-javatra eny amin'ny solaitrabe amin'ireo vehivavy amin'ny harem-panahiny.
Parcheesi sy ny anarany isan-karazany
Rehefa vita tsara ny maka tahaka ny zava-drehetra, tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX, niaraka tamin'ny fanjanahan-tany anglisy, Nanao ny dingana voalohany tany ivelany i Pachisi.
Tsy ela akory dia nampiditra ny lalao tany amin'ny Fanjakana Mitambatra ny mpanjanatan'ny Fanjakana Britanika, izay, taorian'ny fanovana sasany, dia nomena anarana ofisialy hoe Ludo (latina ho an'ny "lalao") izy io ary noho izany dia nahazo patanty tamin'ny 1896.
Ny fantatra nanomboka teo dia "lasa" ny lalao ary, nandritra ny dia, Ludo sy ny karazany dia nahazo laza be tany amin'ny firenena maro eran'izao tontolo izao, amin'ny anarana samihafa.
Any Alemana, ohatra, antsoina hoe "Ludo"Mensch ärgere dich nicht", Izay midika hoe zavatra toy ny"Ry namako, aza tezitra”, Ary manana anarana mitovy amin'izany amin'ny teny holandey, serbo-kroaty, boligaria, tseky, Slovakia ary poloney, izay toerana ahafantarana azy kokoa amin'ny hoe Sinoa ("The Chine (s) e").
Any Suède dia malaza amin'ny hoe “FIA", Anarana iray nalaina avy amin'ny teny latina hoe fiat, izay midika hoe"dia izany tokoa".
Miovaova matetika ny anarana dia ny "FIA-spel"(Fia ny lalao) sy"Fia med knuff”(Fia misy tsindry). Any Danemarka sy Norvezy, hafahafa ihany, nitazona ny anarana Ludo.
Any Amerika Avaratra dia antsoina toy ny any Espana, Parcheesi. Fa misy koa ny fiovaovana noforonin'ny marika samihafa, fantatra amin'ny hoe Miala tsiny! ary Fahoriana.
Ary any Espana, fantatsika rehetra amin'ny hoe Parcheesi.
Ho an'ny sokajin-taona rehetra
Noho ny lalàna somary tsotra izay mora tadidy dia mety ny lalao Parcheesi taona rehetra, fa ny ankizy dia afaka milalao miaraka na amin'ny sisa amin'ny fianakaviana. Ny mahazatra indrindra dia ny mpilalao 2 ka hatramin'ny 4 milalao, fa mahita karazana milalao ihany koa isika mpilalao roa na maromaro. Amin'ity tranga ity, ny loko dia ampiana amin'ny mena, manga, mavo ary maitso nentim-paharazana.
Ho an'ireo izay nahavita nandalo tsy firaharahiana an'io fahagagana io ary tsy nahafantatra tsara ny momba azy, ny Parcheesi dia lalao filan-tsambo izay azo lalaovin'ny mpilalao 2, 3 na 4 (amin'ity tranga ity afaka mamorona tsiroaroa).
Ny tabilaon'ny Parcheesi dia toradroa ary voamarika amin'ny lakroa, miaraka amin'ny sandry tsirairay amin'ny hazo fijaliana misy loko hafa (matetika mena, mavo, maitso ary manga).
Ny mpilalao tsirairay dia tsy maintsy manamboatra ny sombiny 4 antsoina hoe "pawns"Na"soavaly”, Fenoy boribory eo amin'ny solaitrabe ary ahatreha ny kianja farany alohan'ny hafa.
Toy? Milalao dice! Marina izany, lalao vintana ny Parcheesi, saingy tsy latsa-danja amin'izany.
Lalao roa mahazatra
Azo antoka fa efa hitanao fa ny famadihana ny tabilao amin'ity lalao ity dia misy koa ny Lalao ny gisa. Avy koa roa sosona, saingy miaraka amina endrika hafa kely dia ny Lalao Parchis y Gloria. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny angano mahazatra toy ny “Ny vitsika sy ny valala"Na"Ny amboahaolo sy ny goaika”, Ahafahan'ny ankizy mihoatra ny 3 taona miala voly amin'ny lalao roa. Toy ny soavaly ny endriny.